TTSweet: မင်းကတော် အမေ
Posted by T T Sweet at 2:40 PM
မဒမ်ကိုး December 15, 2011 at 3:21 PM
လာလာအတုယူရတယ် မင်းကတော်အမေကြီးရယ် ဟိဟိ
အဲ အမကလဲ ဂျုဂျုလေးကတော့လိမ်မာမယ့်ပုံလေးပါနော်
Yuya Mon December 15, 2011 at 3:34 PM
AMK December 15, 2011 at 3:54 PM
ဂျူဂျူလေး က လိမ်မာပါတယ် တီတီဆွိ ရဲ့ငယ်သေးလို့ နေမှာပါ
မြသွေးနီ December 15, 2011 at 4:02 PM
မင်းကတော်တီတီဆွိရဲ့ မုန့်ထုတ်လေးကိုင်ထားတဲ့ အပြေးအလွှားပုံလေးကို မြင်မိလိုက်တယ်..။ မိဘဆိုတော့ သားသမီးကို အစစပြည့်စုံစေချင်တာ သဘာဝပါနော်..။ ပုံထဲမှာ ဂျူးဂျူးလေး ၀လာသလိုပဲ...။
T T Sweet December 15, 2011 at 4:43 PM
ဂျူဂျူးပုံလေးတွေ ၀နေတာလေးတွေက စလုံးမှာတုံးကလေ။ အဲဒီမှာက နေ့ခင်းစာရော ညနေစာပါ အိမ်မှာဂရုစိုက်ကျွေူးတော့ ခလေးက ၀တယ်။ ဒီမှာတော့ နေ့ခင်းစာကျောင်းမှာ စားရတော့ သူဟာသူဆို ဂရုစိုက်မစားဘူးလေ။ ဒါကြောင့်ပိန်တာ။ တလောကလဲ အအေးမိနေမကောင်းဖြစ်လိုက်သေးတယ်။
ဟုတ်တယ် သမီးက အရမ်းအဆိုးကြီးထဲမှာတော့ မပါပါဘူး။ ရန်ကုန်ပြန်ရင်တော့ ၀မ်းကွဲတွေထဲမှာ သူက အလိမ်မာဆုံးတဲ့ အမေက အမြဲပြောတယ်။ ငယ်သေးတော့ တစ်ခါတစ်လေ နားမလည်သေးတာ။ မသိတတ်တာလေးတွေပါ။
အမေ့ မေတ္တာတွေကို မြင်နေရတယ်။
တီဆွိကို ရေးတာကို ရယ်နေရပေမယ့် ငိုချင်သွားတယ်။
susu December 15, 2011 at 5:11 PM
Vista December 15, 2011 at 5:27 PM
ကြိတ်ရီသွားတယ် .. မင်းကတော်နဲ့ တော့နိုင်းပါနဲ့တူညား ညလေး က လိမ်မာပါတယ် ဟွန့် ..
အလုပ်မလုပ်တာရော၊ တဦးတည်းသောသမီးလေးတို.ရဲ.အမေတွေရဲ.ဖြစ်စဉ်တွေရော၊ ကိုယ်.နိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘဲ တခြားနိုင်ငံမှာကျောင်းထားရတော. သမီးလေးကိုအစစအမြဲ ပြည်.စုံနေစေချင်တာတွေ အားလုံးအားလုံး
Miss my mom after reading this post.
ဘေဘီ December 15, 2011 at 9:55 PM
ကျမလည်း သမီးလေးကို သိပ်ချစ်တယ်
ကျမငယ်စဉ်က မပြည့်စုံခဲ့တော့ သမီးလေးကို
အရာရာ ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တယ်။ ကိုယ့်ပေါ်
သိတတ်တာ မသိတတ်တာတော့ ကုသိုလ်ကံပဲပေါ့လေနော့
Myanmar Good Knowledg Co., Ltd December 15, 2011 at 10:18 PM
သုံးခေါက်ပြန်ထားတဲ့လမ်းကိုမောကြီးပမ်းကြီးနဲ့ ဖြတ်သန်းပြီးမုန့်ထုပ်လေးကိုင်ပြီးဇောကပ်နေပုံကို မြင်ယောင်မိတယ်။
We all are the same and this is one of natural truth.Don't think and compare to minngadaw cos Ju Juu is still young.She gonna be clever,i'm sure cos she is your daughter true good seed.BTW my 2nd little bird fly away for education and the brunch tremble,not feeling light hearted.Just sharing to prepair in advance....Little sis.
အိမ်မက်စေရာ December 15, 2011 at 10:24 PM
Anonymous December 15, 2011 at 11:23 PM
အမ ကျမလဲ မိခင်ဆိုတော. ကိုယ်ချင်းစာတယ် ကိုယ်ငယ်ငယ်က မသုံးခဲ.ရတာမျိုး သူတို.သုံးနေရင် ကြည်နူးနေကော.... အခုလဲ နိုင်ငံခြားမှာ အသက် ငယ်ငယ်နဲ.စာလာသင်နိုင်တာ ဝမ်းသာမိကော . ကိုယ်ကတော. ကြီးမှရောက်တာလေနော်. ဒါပေမဲ. အမရယ် စိတ်လျော.ထားရတယ် တချို.ဟာတွေက . သိတတ်အောင်တော. တဖြေးဖြေးနဲ. ပြောယူရတာပေါ.နော် သမီးမိန်းကလေးတွေက သိတတ်ပါတယ် ငယ်သေးလို.ပါ
July December 16, 2011 at 2:25 AM
မဆွိရေးတာကို မျက်စိထဲလဲ မြင်လို့ ရသလို ထပ်တူလဲ ခံစားလို့ရပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျမတို့က မိခင်ဖြစ်သလို တဦးတည်းသော သမီးတွေရဲ့ မိခင်တွေ ဖြစ်လို့ပါ၊ ကျမသမီးလဲ သိပ်မေ့တတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် မဆွိရယ် တခါတလေ ကျမတို့ထင်သလောက် သမီးတွေက မဆိုးပါဘူး၊ သူတို့က သိပ်နားလည်တတ်တာကို မုကာခဏ ကျမတို့ သတိထားမိရင်တွေ့ရပါတယ်၊ ကလေးဆိုတာတော့ ကျမတို့လောက်လဲ သိပ်မတွေးဘူး။ ကျမတို့လောက်လဲ သိပ်မရျပ်ထွေးဘူးလေ၊ သိတယ်မှလား။ အမေကလဲ သိပ်ချစ်သိပ်အလိုလိုက်တာမျိုးလဲ သူတို့က သိလေတော့ တော်ရုံတန်ရုံဆိုလဲ ကျမတုို့ကို အားကိုးနေတော့တယ်၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေလေ ဂျူဂျုလေးပြုံးနေတဲ့ မျက်နှာလေးကို မြင်လိုက်ရရင် ပင်ပန်းသမျတွေက ပီတိလေးတွေ ဖြစ်နေမှာကို သိနေပါတယ်၊ သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ မိခင်တယောက်ကို ဂျူဂျူ ရထားတာပါ၊
သမီးကိုသိပ်ချစ်တဲ့ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို ခံစားရတယ် တီတီဆွိရေ။ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာခံစားရတယ်။ ကျနော်လဲငယ်ငယ်တုံးက အလိုက်မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အရွယ်ရောက်လာတော့ အလိုလိုသိတက်လာတယ် (ထင်တာပဲး) )။ အခုဆို ကိုယ့်ဖာသာချက်စားဖို့ ဈေးဝယ်ရင်တောင် ငါဒီလောက်ချေးများတာ မေမေဆို တော်တော်ဦးနှောက်ခြောက်ခဲ့ရမှာပဲဆိုပြီး ကိုယ့်အမေ့ကို သတိတရကျေးဇူးတင်နေသေးတာ။ ဂျူဂျူလေးလဲ ငယ်သေးလို့ပါဗျ။ (အစ်မရေ သွားရလွယ်ရလွယ်အောင် ကားမသုံးချင်ရင် စက်ဘီးစီးပါလားဗျ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရာလည်း ကျတာပေါ့။)
San San Htun December 16, 2011 at 10:02 AM
မင်းကတော်ရဲ့မေတ္တာတွေကို ခံစားမိပါတယ်..
JuneOne December 16, 2011 at 2:37 PM
အီးမေးအတွက်ကျေးဇူးနော်။ဒီမှာလဲ ဘယ်အချိန် မင်းကတော်အမေဖြစ်မလဲ မသိသေးဘူး။အခုတော့ ငယ်သေးလို့သိပ် မသိသာသေးဘူး။မင်းကတော် ကို
မေမေ့ ကို သတိရသွားပြီ
နိုင်နိုင် December 17, 2011 at 1:33 AM
သမီးလေးကလည်း တစ်နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်.. ကလေးဆိုင်လေးတွေသွားလို့ သူ့မျက်လုံးလေးနဲ့စိုက်ကြည့်တာများဆို ၀ယ်ပေးချင်နေတော့တာပ.ဲ ၀ယ်ပေးလိုက်တော့တာပဲ..သူ့ခမျာမပြောတတ်လို့ လိုချင်ရှာတာ သူ့ကိုယ်စားလည်းလူကြီးတွေကိုပြောရသေးရဲ..၀ယ်တာများလို့ ဆူမှာစိုးလို့လေ..ကိုယ့်အတွက်ဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူး..
mini princess, kiddy place,...ကလေးဆိုင်လေးတွေ ၀ယ်လွန်းလို့ member ကိုလုပ်ထားလိုက်တော့တယ်..ကောင်းရောနော်..
rose of sharon December 17, 2011 at 1:59 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 18, 2011 at 4:59 AM
ကလေးတွေအုပ်စုလိုက်ကြီး အပျော်ခရီးအနေနဲ့ သွားကြတော့ ဂျူဂျူးလေးက စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်နေမှာဘဲ။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့မှာ မုန့်ထုပ်တောင် သတိမရတော့တာဖြစ်မယ်.. လူကြီးတွေတောင် အဲလိုမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ မုန့်ထုပ်ကြီးကိုင်ပြီး ကျန်ခဲ့မဲ့ အစ်မရဲ့ နေရာက စဉ်းစားလိုက်ရင်လည်း နားလည်ခံစားပေးနိုင်ပါတယ်. ကိုယ်သာဆိုရင်လည်း အဲဒီစိတ်မျိုးထက် မလျော့ရင်သာရှိရမယ် ဂရုဏာ ဒေါသောစိတ်လေးတွေ ဖြစ်မိမှာပါ။ ပင်ပင်ပန်းပန်း တကူးတက လာပေးပြီးမှ လက်ထဲ မထည့်လိုက်နိုင်တဲ့အဖြစ်
မယ့်ကိုး December 20, 2011 at 12:33 AM
ဒီစာဖတ်ပြီး သိပ်ငိုချင်တာပဲ ....ခဏခဏလည်း လာဖတ်မိတယ်။ မယ့်ကို မွေးစားပါလား မမ...လိမ္မာပါ့မယ် :D
နဲနဲ လောက် လျှော့ချစ်ပါလား။ ဘ၀သင်ခန်းစာ တချို့ ကို ဂျူဂျူလေးသင်ယူပါစေဦး။ သူလေး အရွယ်ရောက်လို့ တက္ကသိုလ် သွားရင် တို့ အမတော့ မျက်ရည်နဲ့နေ့ တိုင်း နှစ်ပါးသွားနေရမယ်။
AMK December 31, 2011 at 10:23 PM
Wishing you and your familyaHappy Wealthy New Year 2012
mstint January 1, 2012 at 4:25 PM
ချစ်သမီး ချစ် ခင်ပွန်းတို့နဲ့ ဒီ့ထက်ဒီပျော်ရွင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ် မဆွိရေ။
khin January 3, 2012 at 8:15 AM
Long time no see. Don't leave your readers, we miss u so much. Happy New Year 2012.
We r waiting new posts...Too Quiet.
ပိုစ့်အသစ်ကို နေ့တိုင်းလာကြည့်တယ်။ အစ်မ မအားဘူးထင်တယ်။
Happy New Year ပါဗျာ။ မိသားစုနဲ့အတူ အမြဲပျော်ရွှင်ပါစေခင်ဗျာ။
New post PLS!!!
ဘေဘီ January 6, 2012 at 12:40 PM
မအားဘူးထင်တယ် .... ပို့စ်သစ်မျှော်နေတယ်နော်
T T Sweet January 6, 2012 at 7:27 PM
ပို့စ်အသစ်တင်လိုက်ပါပြီ။ သမီးကျောင်းပိတ်လို့ သူ့ကို baby sit နေရလို့ အရင်ကလောက် မအားတော့လို့ ပို့စ်တင်ကျဲသွားပါတယ်။ အားပေးသူများအားလုံးကျေးဇူးပါနော်။
Suchasad letter I had ever read when I was in high school.
Do you know where I can find that movie?